Mid ka mid ah diyaaradihii dhacay oo la helay
Mid ka mid ah diyaaradihii dhacay oo la helay	Last Updated on Monday, 13 August 2012 22:17	Written by Mogadishu Times	Monday, 13 August 2012 22:14	Waxaa maanta la helay diyaarad helicopter ah oo ay lahaayeen ciidamada Ugaandha. Diyaarada waxay ku socotay Soomaaliya si ay uga qeyb qaataan dagaalada Al Shabaab.
Afar askari oo la socotay diyaarada ayaa ka badbaaday. Diyaarada waxay ku dhacday meel keyn ah oo ku taala gudaha Kenya. Waxaa kale oo wali la raadinayaa labo diyaarad oo kale iyo 10 askari oo saarneyd.
Labada diyaarad oo kale waxay ku dhaceen meel aanan ka fogeyn meesha laga helay diyaarada. Ilaa iyo hadda lama sheegin sababta keentay in ay dhacaan 3 diyaarad. Macquul ma’aha in ay 3 diyaarad isku waqti ay cilad farsamo u dhacaan.
Waxay u badan tahay in diyaaradaha ay soo rideen kooxda Al Shabaab. Xuduuda Kenya iyo Soomaaliya waxaa la tilmaamay in ay ku dhuumaaleysanayaan ciidamo ka tirsan Al Shabaab.